Faritra Vakinankaratra : Noraisin’ny Filoha teny Iavoloha ireo ben’ny tanàna -
AccueilSongandinaFaritra Vakinankaratra : Noraisin’ny Filoha teny Iavoloha ireo ben’ny tanàna
Faritra Vakinankaratra : Noraisin’ny Filoha teny Iavoloha ireo ben’ny tanàna
Nihaona mivantana tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ireo ben’ny tanàna manodidina ny 100 avy amin’ny Faritra Vakinankaratra, ny sabotsy 10 febroary teo, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha.
Tamin’izany indrindra no nitondran’ireo ben’ny tanàna ny hetahetany amin’ny fampandrosoana. Nisy ihany koa anefa ny dinidinika nifanaovana tamin’ny Filohan’ny Repoblika mahakasika ny fampandrosoana eny ifotony izay tokony mifanaraka amin’ny vina “Fisandratana 2030”.
Ireo ben’ny tanàna avy amin’ny Faritra Vakinankaratra izany no noraisin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina voalohany tamin’ity taona 2018 ity ho amin’ny Fisandratana. “Ny fifanakalozana sy ny dinika, dia mandrafitra sahady ho an’ny tsirairay ny fomba sy ny lalam-pampandrosoana mba hisian’ny firaisan-kevitra ho amin’izay napetraka sy hotanterahina amin’ny ady amin’ny fahantrana. Mba hampandrosoana ny firenena amin’ny alalan’ny Fisandratana. Efa nanazava mahakasika ny harin-karena faobe ny tenako, izay 416 Dolara izany amin’izao fotoana izao. Tanjontsika ny hahatrarana ny harin-karena faobe ho tonga 1 000 Dolara hatramin’ny taona 2030, izay ho tombontsoan’ny Malagasy rehetra, na iza no ho Filoham-pirenena amin’izany”, hoy ny Filoham-pirenena.
Notsindrian’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa tsy ho tanteraka ireo tetikasa napetraka sy hapetraka raha tsy miainga amin’ny hambom-po iraisana, ilay fahaterahana vaovao izay manova sy hitondra amin’ny fanovana toe-tsaina ho amin’ny kolontsaim-pampandrosoana, ary koa ny hanatanterahana ny “Fisandratana 2030”.
Nohazavain’ny Filoha tamin’izany ihany koa ireo tendrom-pampandrosoana goavana efatra izay efa tafapetraka. Eo ny tendro goavana afovoany, izay tafiditra indrindra ao anatiny ny Faritra Vakinankaratra, indrindra fa Antsirabe izay ho lasa tendro ara-toekarena goavana amin’ny taona 2030. Ny tendro goavana andrefana mandrafitra ny manodidina ny tontolo mifandraika indrindra amin’ny solika. Ho lasa toerana falehan’izao tontolo izao eo amin’ny resaka fizahantany koa indray ny tendro goavana avaratra amin’ny taona 2030. Toraka izany koa ny tendro goavana atsimo, izay ho lasa tobim-pamokarana indostrialy, sns.
Raha ny mahakasika ny faritra Vakinankaratra manokana, dia nanambara ny Filohan’ny Repoblika fa manana fahafahana ho amin’ny fampandrosoana ny indostria kely, ny lamba, ny sakafo, fandraharahana ara-pambolena sy ny fiompiana, sns, iny Faritra iny. Nohamafisiny ihany koa ny maha zava-dehibe ny famoronana ireo orinasa kely sy salantsalany eo amin’ny fiompiana sy ny fampivoarana ny tontolon’ny fizahantany. “Tsy ho tanteraka anefa ireo tetikasa fampandrosoana rehetra ilain’ny vahoaka ireo raha tsy misy ny fitoniana ara-tsosialy sy ara-politika. Mila ihany koa isika manaja ny lalàna velona, mampiseho ny fitiavan-tanindrazana. Ianareo ben’ny tanàna ireo, ianareo no mila manome ohatra ho an’ny mponina”, hoy ny Filoham-pirenena teny am-pamaranana.